Settings/res/values-my/strings.xml - platform/packages/apps/TvSettings - Git at Google
android / platform / packages / apps / TvSettings / fce6fdbcaf90625b567fe9bc209e790144258d5e / . / Settings / res / values-my / strings.xml
blob: 4d46932455f153b716d08c9a9ec3e92148e2f02b [file] [log] [blame]
<string name="settings_app_name" msgid="7931201304065140909">"ဆက်တင်များ"</string>
<string name="launcher_settings_app_name" msgid="1459269619779675736">"ဆက်တင်များ"</string>
<string name="launcher_network_app_name" msgid="8311763462169735002">"ကွန်ရက်"</string>
<string name="launcher_restricted_profile_app_name" msgid="3324091425480935205">"ကန့်သတ် ပရိုဖိုင်"</string>
<string name="header_category_suggestions" msgid="106077820663753645">"အကြံပြုချက်များ"</string>
<string name="header_category_quick_settings" msgid="3785334008768367890">"အမြန် ဆက်တင်များ"</string>
<string name="header_category_general_settings" msgid="3897615781153506434">"အထွေထွေဆက်တင်များ"</string>
<string name="dismiss_suggestion" msgid="6200814545590126814">"အကြံပြုချက်ကို ပယ်ပါ"</string>
<string name="hotwording_title" msgid="2606899304616599026">"\_"OK Google\_" အာရုံခံသိခြင်း"</string>
<string name="hotwording_summary" msgid="2170375928302175449">"အချိန်မရွေး Google Assistant ကို စကားပြောရန်"</string>
<string name="header_category_device" msgid="3023893663454705969">"ကိရိယာ"</string>
<string name="header_category_preferences" msgid="3738388885555798797">"ဦးစားပေးချက်များ"</string>
<string name="header_category_accessories" msgid="8310540329290988415">"အဝေးထိန်း &amp; အသုံးအဆောင်များ"</string>
<string name="header_category_personal" msgid="7880053929985150368">"ကိုယ်ရေး"</string>
<string name="connect_to_network" msgid="4133686359319492392">"ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ရန်"</string>
<string name="add_an_account" msgid="2601275122685226096">"အကောင့်တစ်ခုထည့်ရန်"</string>
<string name="accounts_category_title" msgid="7899133563558530195">"အကောင့်များနှင့် လက်မှတ်ထိုးဝင်ရန်"</string>
<string name="accounts_category_summary_no_account" msgid="3053606166993074648">"အကောင့်မရှိ"</string>
<item quantity="other">အကောင့် <xliff:g id="ACCOUNTS_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ခု</item>
<item quantity="one">အကောင့် <xliff:g id="ACCOUNTS_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ခု</item>
<string name="connectivity_network_category_title" msgid="8226264889892008114">"ကွန်ရက်နှင့် အင်တာနက်"</string>
<string name="applications_category_title" msgid="7112019490898586223">"အက်ပ်များ"</string>
<string name="device_pref_category_title" msgid="8292572846154873762">"စက် ရွေးချယ်စရာများ"</string>
<string name="remotes_and_accessories_category_title" msgid="4162706682994116779">"အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ"</string>
<string name="remotes_and_accessories_category_summary_no_bluetooth_device" msgid="3604712105359656700">"ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘလူးတုသ်စက်ပစ္စည်း မရှိပါ"</string>
<item quantity="other">ဆက်စပ်ပစ္စည်း <xliff:g id="ACCESSORIES_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ခု</item>
<item quantity="one">ဆက်စပ်ပစ္စည်း <xliff:g id="ACCESSORIES_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ခု</item>
<string name="add_account" msgid="7386223854837017129">"အကောင့်ထည့်ရန်"</string>
<string name="account_header_remove_account" msgid="8573697553061331373">"အကောင့်ကို ဖယ်ရှားရန်"</string>
<string name="account_sync" msgid="4315295293211313989">"စင့်ခ်လုပ်ထားသည့် အက်ပ်များ ရွေးရန်"</string>
<string name="sync_now" msgid="4335217984374620551">"ယခု စင့်ခ်လုပ်ရန်"</string>
<string name="sync_in_progress" msgid="8081367667406185785">"စင့်ခ်လုပ်နေဆဲ…"</string>
<string name="last_synced" msgid="8371967816955123864">"နောက်ဆုံး စင့်ခ်လုပ်ချိန် <xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="sync_disabled" msgid="6652778349371079140">"ပိတ်ထား"</string>
<string name="account_remove" msgid="8456848988853890155">"အကောင့်ကို ဖယ်ရှားရန်"</string>
<string name="account_remove_failed" msgid="5654411101098531690">"အကောင့်ကို ဖယ်ရှား မရနိုင်"</string>
<string name="sync_one_time_sync" msgid="1665961083810584134">"ယခု စင့်ခ်လုပ်ပါ<xliff:g id="LAST_SYNC_TIME">
<string name="sync_failed" msgid="2998289556481804047">"ဆင့်ခ် မအောင်မြင်ပါ"</string>
<string name="sync_active" msgid="1621239982176888680">"ဆင့်ခ် ဖွင့်ထားသည်"</string>
<string name="connectivity_ethernet" msgid="4270588618633681766">"အီသာနက်"</string>
<string name="connectivity_summary_ethernet_connected" msgid="2612843587731520061">"အီတာနက် ချိတ်ထားသည်"</string>
<string name="connectivity_summary_no_network_connected" msgid="6111160695454212460">"မည်သည့် ကွန်ရက်မျှ ချိတ်ဆက်မထားပါ"</string>
<string name="connectivity_summary_wifi_disabled" msgid="7819225159680467324">"Wi-Fi ကို ပိတ်ထားသည်"</string>
<string name="wifi_setting_always_scan" msgid="431846292711998602">"စကင် အမြဲတန်းလုပ်နိုင်ခြင်း"</string>
<string name="wifi_setting_always_scan_context" msgid="1092998659666221222">"Wi-Fi ပိတ်ထားစေကာမူ Google ၏ တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားအက်ပ်များအား ကွန်ရက်များ ရှာဖွေခွင့်ပေးပါ"</string>
<string name="connectivity_hint_message" msgid="5638304246522516583">"ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ရန်"</string>
<string name="apps_recently_used_category_title" msgid="7877660412428813933">"မကြာသေးမီက ဖွင့်ထားသော အက်ပ်များ"</string>
<string name="apps_see_all_apps" msgid="2002886135933443688">"အက်ပ်အားလုံးကိုကြည့်ရန်"</string>
<string name="apps_permissions_category_title" msgid="8099660060701465267">"ခွင့်ပြုချက်များ"</string>
<string name="all_apps_title" msgid="3717294436135280133">"အက်ပ်အားလုံး"</string>
<string name="all_apps_show_system_apps" msgid="1260688031005374302">"စနစ်အက်ပ်များ ပြသရန်"</string>
<string name="all_apps_installed" msgid="8217778476185598971">"ထည့်ထားသည့် အက်ပ်များ"</string>
<string name="all_apps_other" msgid="4420174882983813158">"စနစ် အက်ပ်များ"</string>
<string name="all_apps_disabled" msgid="2776041242863791053">"ပိတ်ထားသော အက်ပ်များ"</string>
<string name="device_daydream" msgid="2631191946958113220">"ဖန်သားပြင်အသုံးပြုမှု ချွေတာမှုစနစ်"</string>
<string name="device_display" msgid="244634591698925025">"မြင်ကွင်း"</string>
<string name="device_sound" msgid="8616320533559404963">"အသံ"</string>
<string name="device_surround_sound" msgid="1889436002598316470">"ပတ်ပတ်လည်အသံစနစ်"</string>
<string name="device_sound_effects" msgid="2000295001122684957">"စနစ်၏ အသံများ"</string>
<string name="device_apps" msgid="2134756632245008919">"အပလီကေးရှင်းများ"</string>
<string name="device_storage" msgid="8540243547121791073">"သိုလှောင်မှု"</string>
<string name="device_reset" msgid="8964022725655207224">"ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်"</string>
<string name="device_backup_restore" msgid="4552158624969018687">"ဘက်အာပ် လုပ်ခြင်း &amp; ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ခြင်း"</string>
<string name="device_factory_reset" msgid="1110189450013225971">"စက်ရုံထုတ် အခြေအနေ ပြန်ယူခြင်း"</string>
<string name="device_calibration" msgid="2907914144048739705">"စံကိုက်ညှိမှု"</string>
<string name="surround_sound_select_formats" msgid="6070283650131226239">"ပုံစံများ ရွေးရန်"</string>
<string name="surround_sound_category_title" msgid="5688539514178173911">"ပတ်လည် အသံစနစ်"</string>
<string name="surround_sound_format_ac3" msgid="4759143098751306492">"Dolby ဒစ်ဂျစ်တယ်"</string>
<string name="surround_sound_format_e_ac3" msgid="6923129088903887242">"Dolby ဒစ်ဂျစ်တယ် Plus"</string>
<string name="surround_sound_auto_info" msgid="852202989256054406">"မှတ်ချက်- သင့်စက်က ၎င်း ပံ့ပိုးထားသောပုံစံများကို မှန်ကန်စွာ အသိမပေးလျှင် \_'အလိုအလျောက်\_' လုပ်ဆောင်ချက် အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။"</string>
<string name="surround_sound_auto_summary" msgid="5559552398163510156">"အလိုအလျောက်- သင့်စက်က ပံ့ပိုးသည်ဟု အသိပေးထားသော ပုံစံများကို အသုံးပြုပါ (အကြံပြုထားသည်)"</string>
<string name="surround_sound_none_summary" msgid="2791597033750908940">"တစ်ခုမျှမဟုတ်- ပတ်လည် အသံစနစ် ဘယ်တော့မှ မသုံးရန်"</string>
<string name="surround_sound_manual_summary" msgid="8945926149168263067">"မည်သည့်ပုံစံ အသုံးပြုမည်ကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ရန်"</string>
<string name="device_storage_clear_cache_title" msgid="14370154552302965">"ကရှ်ဒေတာများကို ရှင်းမည်လား?"</string>
<string name="device_storage_clear_cache_message" msgid="4352802738505831032">"apps အားလုံးအတွက် ကရှ်ဒေတာများကို ရှင်းမည်။"</string>
<string name="accessories_add" msgid="413764175035531452">"အသုံးအဆောင်များ ထည့်ရန်"</string>
<string name="accessory_state_pairing" msgid="15908899628218319">"တွဲချိတ်နေ…"</string>
<string name="accessory_state_connecting" msgid="6560241025917621212">"ချိတ်ဆက်နေ..."</string>
<string name="accessory_state_error" msgid="8353621828816824428">"ချိတ်တွဲ မရနိုင်ခဲ့"</string>
<string name="accessory_state_canceled" msgid="4794837663402063770">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="accessory_state_paired" msgid="3296695242499532000">"ချိတ်တွဲထား"</string>
<string name="accessory_options" msgid="774592782382321681">"အသုံးအဆောင်"</string>
<string name="accessory_unpair" msgid="2473411128146068804">"တွဲချိတ်မှုဖြုတ်ရန်"</string>
<string name="accessory_battery" msgid="2283700366184703548">"ဘက်ထရီ <xliff:g id="PERCENTAGE">%1$d</xliff:g>%%"</string>
<string name="accessory_unpairing" msgid="2529195578082286563">"ကိရိယာကို တွဲထားမှုမှ ဖြုတ်နေ…"</string>
<string name="accessory_connected" msgid="5229574480869175180">"ချိတ်ဆက်ထား"</string>
<string name="accessory_change_name" msgid="6493717176878500683">"အမည်ပြောင်းပါ"</string>
<string name="accessory_change_name_title" msgid="451188562035392238">"ဤတွဲဖက်ကိရိယာအတွက် အမည်အသစ်ပေးပါ"</string>
<string name="accessories_add_title" msgid="7704824893011194433">"အသုံးအဆောင်များကို ရှာဖွေနေ…"</string>
<string name="accessories_add_bluetooth_inst" msgid="5109947637581187896">"သင်၏ ဘလူးတုသ် ကိရိယာများကို မချိတ်တွဲမီ၊ ၎င်းတို့ ချိတ်တွဲရေး မုဒ် ထဲမှာ ရှိနေတာကို စစ်ကြည့်ပါ"</string>
<string name="accessories_autopair_msg" msgid="2501824457418285019">"ကိရိယာ တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရာ <xliff:g id="COUNTDOWN">%1$s</xliff:g> စက္ကန့် အတွင်းမှာ အလိုအလျောက် ချိတ်တွဲလိမ့်မည်"</string>
<string name="error_action_not_supported" msgid="5377532621386080296">"ဒီလုပ်ဆော်င်ချက်ကို မပံ့ပိုးပါ"</string>
<string name="bluetooth_pairing_request" msgid="6120176967230348092">"ဘလူးတုသ် တွဲချိတ်ရန် တောင်းခံချက်"</string>
<string name="bluetooth_confirm_passkey_msg" msgid="7397401633869153520">"&lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; နှင့် ချိတ်တွဲရန်၊ ၎င်းက သော့တံ: &lt;b&gt;<xliff:g id="PASSKEY">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt; ကို ပြသနေတာ သေချာပါစေ"</string>
<string name="bluetooth_incoming_pairing_msg" msgid="8587851808387685613">"ထံမှ: &lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;&lt;br&gt; ဒီကိရိယာနှင့် ချိတ်တွဲရမလား?"</string>
<string name="bluetooth_display_passkey_pin_msg" msgid="6934651048757228432">"&lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;&lt;br&gt; နှင့် ချိတ်တွဲရန်၊ ၎င်းပေါ်မှာ: &lt;b&gt;<xliff:g id="PASSKEY">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt; ဆိုပြီး တိုက်ရိုက်ပါ၊ ၎င်းနောက် ပြန်သွားရန် သို့မဟုတ် အင်တာကို နှိပ်ပါ။"</string>
<string name="bluetooth_enter_pin_msg" msgid="8905524093007140634">"&lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;, &lt;br&gt; နှင့် ချိတ်တွဲရန်၊ လိုအပ်သည့် ကိရိယာ၏ PIN ကို ရိုက်ထည့်ပါ:"</string>
<string name="bluetooth_enter_passkey_msg" msgid="889584097447402492">"ချိတ်တွဲရန်: &lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;, &lt;br&gt; ကိရိယာ အတွက် လိုအပ်သည့် သော့တံကို ရိုက်ထည့်ပါ:"</string>
<string name="bluetooth_pin_values_hint" msgid="6237371515577342950">"ပုံမှန်အားဖြင့် ၀၀၀၀ သို့မဟုတ် ၁၂၃၄"</string>
<string name="bluetooth_pair" msgid="2410285813728786067">"ချိတ်တွဲရန်"</string>
<string name="bluetooth_cancel" msgid="4415185529332987034">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="system_date_time" msgid="6938588387002473344">"နေ့စွဲနှင့် အချိန်"</string>
<string name="system_language" msgid="5516099388471974346">"ဘာသာစကား"</string>
<string name="system_keyboard" msgid="1514460705385401872">"ကီးဘုတ်"</string>
<string name="system_keyboard_autofill" msgid="3689510278682933776">"ကီးဘုတ်နှင့် အလိုအလျောက်ဖြည့်"</string>
<string name="system_autofill" msgid="6983989261108020046">"အလိုအလျောက်ဖြည့်"</string>
<string name="system_home" msgid="2149349845791104094">"မျက်နှာစာဖန်သားပြင်ပုံစံ"</string>
<string name="system_search" msgid="3170169128257586925">"ရှာဖွေရန်"</string>
<string name="system_security" msgid="5053021134921182612">"လုံခြုံရေး &amp; ကန့်သတ်ချက်များ"</string>
<string name="system_speech" msgid="8779582280374089518">"နှုတ်စကား"</string>
<string name="system_inputs" msgid="5552840337357572096">"ထည့်သွင်းမှုများ"</string>
<string name="system_inputs_devices" msgid="8423782334271632810">"အဝင်နှင့် စက်များ"</string>
<string name="system_home_theater_control" msgid="6228949628173590310">"အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံ ထိန်းချုပ်မှု"</string>
<string name="system_accessibility" msgid="3081009195560501010">"အများသုံးစွဲနိုင်မှု"</string>
<string name="system_developer_options" msgid="8480844257066475479">"ပြုစုပေးခဲ့သူ အတွက် ရွေးစရာများ"</string>
<string name="accessibility_none" msgid="6355646833528306702">"မရှိ"</string>
<string name="system_diagnostic" msgid="4099565916831872129">"သုံးစွဲမှု &amp; ပြဿနာရှာဖွေမှု"</string>
<string name="tutorials" msgid="7880770425872110455">"အစမ်းလေ့လာမှု"</string>
<string name="about_system_update" msgid="7421264399111367755">"စနစ် မွမ်းမံမှု"</string>
<string name="about_preference" msgid="9112690446998150670">"အကြောင်း"</string>
<string name="device_name" msgid="566626587332817733">"ကိရိယာ အမည်"</string>
<string name="restart_button_label" msgid="911750765086382990">"အစက ပြန်စရန်"</string>
<string name="about_legal_info" msgid="2148797328415559733">"ဥပဒေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ"</string>
<string name="about_legal_license" msgid="4801707286720681261">"အခမဲ့ ရင်းမြစ် လိုင်စင်များ"</string>
<string name="about_terms_of_service" msgid="8514826341101557623">"Google၏ ဥပဒေရေးရာ"</string>
<string name="about_license_activity_unavailable" msgid="4559187037375581674">"လိုင်စင် ဒေတာကို ရှာမရ"</string>
<string name="about_model" msgid="9164284529291439296">"မော်ဒယ်"</string>
<string name="about_version" msgid="7800676128792880991">"ဗားရှင်း"</string>
<string name="about_serial" msgid="3432319328808745459">"အမှတ်စဉ်"</string>
<string name="about_build" msgid="1139171613038225768">"တည်ဆောက်မှု"</string>
<item quantity="other">သင်သည် ယခု ပြုစုသူ တစ်ဦး ဖြစ်လာရန် ခြေလှမ်း <xliff:g id="STEP_COUNT_1">%1$d</xliff:g> သာလိုပါတော့သည်</item>
<item quantity="one">သင်သည် ယခု ပြုစုသူ တစ်ဦး ဖြစ်လာရန် ခြေလှမ်း <xliff:g id="STEP_COUNT_0">%1$d</xliff:g> သာလိုပါတော့သည်</item>
<string name="about_ads" msgid="7662896442040086522">"ကြော်ငြာများ"</string>
<string name="show_dev_on" msgid="612741433124106067">"သင်သည် ယခု ပြုစုသူတစ်ဦး ဖြစ်လာပြီ!"</string>
<string name="show_dev_already" msgid="1522591284776449818">"မလိုတော့ပါ၊ သင်သည် ပြုစုသူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။"</string>
<string name="device_info_default" msgid="2374506935205518448">"အမည်မသိ"</string>
<string name="selinux_status" msgid="1146662734953021410">"SELinux အခြေအနေ"</string>
<string name="selinux_status_disabled" msgid="4027105362332795142">"ပိတ်ထားသည်"</string>
<string name="selinux_status_permissive" msgid="8694617578567517527">"ထိန်းချုပ်မှုမဲ့"</string>
<string name="selinux_status_enforcing" msgid="4140979635669643342">"ဖိအားပေးရန်"</string>
<string name="additional_system_update_settings_list_item_title" msgid="1839534735929143986">"ထပ်တိုးစနစ်အပ်ဒိတ်များ"</string>
<string name="device_status" msgid="8266002761193692207">"အခြေအနေ"</string>
<string name="device_status_summary" msgid="3270932829412434985">"ကွန်ရက်၊ အမှတ်စဉ်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များ"</string>
<string name="manual" msgid="5683935624321864999">"ကိုယ်တိုင်"</string>
<string name="regulatory_information" msgid="9107675969694713391">"စည်းကမ်း အချက်အလက်များ"</string>
<string name="device_feedback" msgid="4871903271442960465">"ဤစက်ပစ္စည်းအကြောင်း တုံ့ပြန်ချက်ကို ပို့ရန်"</string>
<string name="fcc_equipment_id" msgid="6731077083927000108">"ပစ္စည်း ID"</string>
<string name="baseband_version" msgid="5618116741093274294">"baseband ဗားရှင်း"</string>
<string name="kernel_version" msgid="7265509054070001542">"kernel ဗားရှင်း"</string>
<string name="status_unavailable" msgid="2033933928980193334">"မရရှိနိုင်ပါ"</string>
<string name="device_status_title" msgid="9051569510258883673">"အခြေအနေ"</string>
<string name="battery_status_title" msgid="8850166742025222210">"ဘက်ထရီအခြေအနေ"</string>
<string name="battery_level_title" msgid="2672804570916248736">"ဘက်ထရီ အဆင့်"</string>
<string name="sim_status_title" msgid="1704273079796640946">"ဆင်းမ် အခြေအနေ"</string>
<string name="imei_information_title" msgid="3790368306353698724">"IMEI အချက်အလက်များ"</string>
<string name="status_bt_address" msgid="7190052214963950844">"ဘလူးတုသ်လိပ်စာ"</string>
<string name="status_up_time" msgid="1758102680983108313">"ဖွင့်ထားသောအချိန်"</string>
<string name="legal_information" msgid="1087445528481370874">"ဥပဒေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ"</string>
<string name="copyright_title" msgid="5879660711078649518">"မူပိုင်ခွင့်"</string>
<string name="license_title" msgid="4032466200355435641">"လိုင်စင်"</string>
<string name="terms_title" msgid="192888187310800678">"သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများ"</string>
<string name="webview_license_title" msgid="5370270485188947540">"စနစ် WebView လိုင်စင်"</string>
<string name="title_mac_address" msgid="3758483076549542257">"MAC လိပ်စာ"</string>
<string name="title_signal_strength" msgid="5047116893338315998">"ထုတ်လွင့်မှု အား"</string>
<string name="title_ip_address" msgid="705842159484772807">"IP လိပ်စာ"</string>
<string name="title_ssid" msgid="255328048344188682">"Wi-Fi ကွန်ရက် ထည့်သွင်းရန်"</string>
<string name="title_internet_connection" msgid="7502414094881828069">"အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု"</string>
<string name="connected" msgid="4981532275162345997">"ချိတ်ဆက်ထား"</string>
<string name="not_connected" msgid="475810896484271663">"ချိတ်ဆက် မထား"</string>
<string name="wifi_setting_header_other_options" msgid="217382325707026836">"အခြား ရွှေးစရာများ"</string>
<string name="wifi_setting_see_all" msgid="5048103047976316675">"အားလုံးကို ကြည့်ရန်"</string>
<string name="wifi_setting_see_fewer" msgid="8585364493300703467">"လျှော့ကြည့်ရန်"</string>
<string name="wifi_setting_available_networks" msgid="2096957819727319750">"ရနိုင်သော ကွန်ယက်များ"</string>
<string name="wifi_setting_other_options_add_network" msgid="6490215784178866978">"ကွန်ရက် အသစ် ထည့်ရန်"</string>
<string name="security_type" msgid="2297615092250075696">"လုံခြုံရေး ပုံစံ"</string>
<string name="other_network" msgid="5299289104661858596">"အခြား ကွန်ရက်…"</string>
<string name="skip_network" msgid="3095529090560000692">"ကျော်ရန်"</string>
<string name="wifi_security_type_none" msgid="7001835819813531253">"မရှိ"</string>
<string name="title_wifi_no_networks_available" msgid="3696700321170616981">"စကင် လုပ်နေ…"</string>
<string name="title_wifi_could_not_save" msgid="7549912968719395764">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>အတွက် စီစဉ်ဖွဲစည်းမှုကို မသိမ်းဆည်း နိုင်ခဲ့ပါ။"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect" msgid="6654031057635481872">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>သို့ ချိတ်ဆက် မရခဲ့ပါ။"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect_timeout" msgid="7825788623604214601">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>ကို ရှာမတွေ့ခဲ့"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect_authentication_failure" msgid="6626386897327862432">"ကြိုးမဲ့ စကားဝှက် မမှန်"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect_ap_reject" msgid="5182833781690447828">"ကြိုးမဲ့ ကွန်ရက်က ချိတ်ဆက်မှုကို လက်မခံခဲ့"</string>
<string name="title_wifi_advanced_options" msgid="371185991282743258">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> ပရောက်စီ နှင့် IP ဆက်တင်များကို စီစဉ်မလား?"</string>
<string name="title_wifi_proxy_settings" msgid="1933444342984660569">"ပရောက်စီ ဆက်တင်များ"</string>
<string name="title_wifi_proxy_hostname" msgid="1242297002220870385">"ပရောက်စီ ဟို့စ်အမည်:"</string>
<string name="title_wifi_proxy_port" msgid="566244407030390328">"ပရောက်စီ ပို့တ်:"</string>
<string name="title_wifi_proxy_bypass" msgid="8752756240663231435">"…အတွက် လမ်းလွဲရေး ပရောက်စီ"</string>
<string name="title_wifi_ip_settings" msgid="296029383749112888">"IP ဆက်တင်များ"</string>
<string name="title_wifi_ip_address" msgid="5505806431042689276">"IP လိပ်စာ:"</string>
<string name="title_wifi_gateway" msgid="4496416267930824360">"ဝင်ပေါက်"</string>
<string name="title_wifi_network_prefix_length" msgid="3200370297772096824">"ကွန်ရက် ရှေ့ဆက်ပုဒ် အရှည်:"</string>
<string name="title_wifi_proxy_settings_invalid" msgid="7698883245005941665">"ပရောက်စီ ဆက်တင်များ မမှန်"</string>
<string name="title_wifi_ip_settings_invalid" msgid="7283801973512992014">"IP ဆက်တင်များ မမှန်"</string>
<string name="title_wifi_known_network" msgid="6162483884727898697">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> မှာ သိမ်းဆည်းထားသည့် ကွန်ရက်ပါ"</string>
<string name="wifi_action_try_again" msgid="8920677153891141148">"ထပ် စမ်းပါ"</string>
<string name="wifi_action_view_available_networks" msgid="609561604257828342">"ရနိုင်သည့် ကွန်ရက်များကို ကြည့်ရန်"</string>
<string name="wifi_connecting" msgid="4234341255109283018">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>သို့ ချိတ်ဆက်နေ"</string>
<string name="wifi_saving" msgid="320653339670641708">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>အတွက် စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကို သိမ်းဆည်းနေ"</string>
<string name="wifi_connect" msgid="2206086690065242121">"ချိတ်ဆက်ရန်"</string>
<string name="wifi_forget_network" msgid="4634016112624305571">"ကွန်ရက်ကို မေ့ပစ်ရန်"</string>
<string name="wifi_forget_network_description" msgid="4146715475962713899">"၎င်းက ဒီကွန်ရက်ကို ချိတ်ဆက်စဉ် အသုံးပြုခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို၊ သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် စကားဝှက် တစ်ခုခု အပါအဝင်ကို၊ ရှင်းပစ်သည်။"</string>
<string name="wifi_setup_action_dont_change_network" msgid="2999582059217623090">"ရှေ့ဆက်ရန်"</string>
<string name="wifi_setup_action_change_network" msgid="1603908238711710943">"ကွန်ရက် ပြောင်းရန်"</string>
<string name="wifi_action_change_network" msgid="3943123581726966199">"ပြောင်းလဲရန်"</string>
<string name="wifi_action_dont_change_network" msgid="2685585142299769847">"မပြောင်းလဲပါနှင့်"</string>
<string name="wifi_action_advanced_no" msgid="6152107256122343959">"မသုံးရန် (အကြံပြုထား)"</string>
<string name="wifi_action_proxy_none" msgid="4009573120495700922">"မရှိ"</string>
<string name="wifi_action_proxy_manual" msgid="7667686394955896293">"လက်ဖြင့်"</string>
<string name="wifi_action_static" msgid="8139559358727790887">"ငြိမ်နေသော"</string>
<string name="wifi_action_status_info" msgid="3947061894001350963">"အခြေအနေ အင်ဖို"</string>
<string name="wifi_action_advanced_options_title" msgid="2863126553877147921">"အဆင့်မြင့် ရွေးစရာများ"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_ip_address" msgid="4051342269154914595">"မှန်ကန်သည့် IP လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပါ"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_gateway" msgid="4511579679784872130">"မှန်ကန်သည့် ဝင်ပေါက် လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_dns" msgid="5111100342560120360">"မှန်ကန်သည့် DNS လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_network_prefix_length" msgid="2726889303835927777">"၀ နှင့် ၃၂ အကြားရှိ ကွန်ရက် ရှေ့ဆက်ပုဒ် ထည့်ပါ။"</string>
<string name="wifi_ip_address_description" msgid="7109677764979198618">"မှန်ကန်သည့် အိုင်ပီလိပ်စာကို ထည့်ပါ။\_nဥပမာ −<xliff:g id="ID_1">192.168.1.128</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_dns1_description" msgid="2287252520192279195">"မှန်ကန်သည့် အိုင်ပီလိပ်စာကို ထည့်ပါ သို့မဟုတ် ဗလာချန်ထားပါ။\_nဥပမာ − <xliff:g id="ID_1">8.8.8.8</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_dns2_description" msgid="6495565714252833784">"မှန်ကန်သည့် အိုင်ပီလိပ်စာကို ထည့်ပါ သို့မဟုတ် ဗလာချန်ထားပါ။\_nဥပမာ − <xliff:g id="ID_1">8.8.4.4</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_gateway_description" msgid="8902481147103929271">"မှန်ကန်သည့် အိုင်ပီလိပ်စာကို ထည့်ပါ သို့မဟုတ် ဗလာချန်ထားပါ။\_nဥပမာ − <xliff:g id="ID_1">192.168.1.1</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_network_prefix_length_description" msgid="2670994968279018896">"မှန်ကန်သည့် ကွန်ရက်ရှေ့ဆက်ပုဒ် အရှည်ကိုထည့်ပါ။\_nဥပမာ − <xliff:g id="ID_1">24</xliff:g>"</string>
<string name="proxy_error_invalid_host" msgid="5629893736174170157">"ဟို့စ်အမည် မမှန်ပါ"</string>
<string name="proxy_error_invalid_exclusion_list" msgid="1762079966901078116">"ဒီချန်လှပ် စာရင်း မမှန်ပါ။ ချန်လှပ်ထားသည့် ဒိုမိန်းများ၏ စာရင်းကို ကော်မာ ထည့်ပေးလျက် ခြားပေးရန် လိုသည်။"</string>
<string name="proxy_error_empty_port" msgid="692020249267351015">"ပို့တ် အကွက်ကို ဗလာ မဖြစ်နိုင်ပါ"</string>
<string name="proxy_error_empty_host_set_port" msgid="5347712018244852847">"ဟို့စ် အကွက် ဗလာဖြစ်နေလျှင်၊ ပို့တ် အကွက်ကို ဗလာ ချန်ထားပါ"</string>
<string name="proxy_error_invalid_port" msgid="5307010810664745294">"ပို့တ် မမှန်ပါ"</string>
<string name="proxy_warning_limited_support" msgid="4220553563487968684">"HTTP ပရော့က်စီကို ဘရောင်ဇာက သုံးသော်လည်း အခြား အက်ပ်များက သုံးချင်မှ သုံးကြမည်"</string>
<string name="proxy_port_description" msgid="6486205863098427787">"မှန်ကန်သည့် ပေါ့တ်နံပါတ်ကို ထည့်ပါ\_nဥပမာ − <xliff:g id="ID_1">8080</xliff:g>"</string>
<string name="proxy_exclusionlist_description" msgid="5105504899364188296">"ကော်မာခြားထားသည့် ပယ်ထားသောဒိုမိန်းစာရင်းကို ထည့်ပါ သို့မဟုတ် ဗလာချန်ထားပါ။\_nဥပမာ − <xliff:g id="ID_1">example.com,mycomp.test.com,localhost</xliff:g>"</string>
<string name="proxy_hostname_description" msgid="5520200112290557199">"မှန်ကန်သည့် လက်ခံစက်အမည်ကို ထည့်ပါ။\_nဥပမာ − <xliff:g id="ID_1">proxy.example.com</xliff:g>"</string>
<string name="title_wifi_eap_method" msgid="4351752615786996226">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> အတွက် EAP နည်းလမ်း ရွေးရန်"</string>
<string name="title_wifi_phase2_authentication" msgid="1167205033305931574">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> အတွက် အဆင့်၂ အထောက်အထားစိစစ်ခြင်း ရွေးရန်"</string>
<string name="title_wifi_identity" msgid="6273917200971028259">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> အတွက် စိစစ်အတည်ပြုမှု ထည့်ရန်"</string>
<string name="title_wifi_anonymous_identity" msgid="5965175781722004334">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> အတွက် အမည်မဖော်သည့် စိစစ်အတည်ပြုမှု ထည့်ရန်"</string>
<string name="wifi_setup_summary_title_connected" msgid="2725439590655448489">"သင်သည် <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်"</string>
<string name="wifi_summary_title_connected" msgid="201105022065577659">"ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်ထား"</string>
<string name="wifi_summary_title_not_connected" msgid="7991004795297065201">"ကွန်ရက်ကို မချိတ်ဆက်ရသေးပါ"</string>
<string name="wifi_summary_description_connected_to_wifi_network" msgid="8796747274977762311">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>သို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီးနေပြီ။ အခြား ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ရမလား?"</string>
<string name="wifi_summary_unknown_network" msgid="8044143986439139664">"မသိရ ကွန်ရက်"</string>
<string name="title_cancel" msgid="2337143367016419016">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="storage_title" msgid="6637715914885228193">"သိုလှောင်မှု"</string>
<string name="storage_available" msgid="8860901789290434209">"ရနိုင်သော"</string>
<string name="storage_size" msgid="5517261387579171381">"စုစုပေါင်း နေရာ: <xliff:g id="TOTAL_SPACE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_calculating_size" msgid="5716281278843281044">"တွက်ချက်နေ…"</string>
<string name="storage_apps_usage" msgid="8659915575274468924">"အက်ပ်များ"</string>
<string name="storage_downloads_usage" msgid="8429196848359517158">"ဒေါင်းလုဒ်များ"</string>
<string name="storage_dcim_usage" msgid="337290403400541958">"ဓာတ်ပုံများ &amp; ဗီဒီယိုများ"</string>
<string name="storage_music_usage" msgid="5362871290115089474">"အသံ"</string>
<string name="storage_media_misc_usage" msgid="3404230292054880339">"အထွေထွေ"</string>
<string name="storage_media_cache_usage" msgid="6397941751551207630">"ကက်ရှ်လုပ်ထားသော ဒေတာ"</string>
<string name="storage_eject" msgid="3268870873944951902">"ထုတ်မည်"</string>
<string name="storage_format" msgid="1068977713279648756">"ပယ်ဖျက်ရန် &amp; amp; ဖောမတ်ချရန်"</string>
<string name="storage_format_as_private" msgid="77945551149326052">"စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခန်းအဖြစ် ဖျက်ပြီး ဖောမတ်ချပါ"</string>
<string name="storage_format_as_public" msgid="6745112917895223463">"ရွှေ့လျား၍ရသော သိုလှောင်ခန်းအဖြစ် ဖျက်ပြီး ဖောမတ်ချပါ"</string>
<string name="storage_format_for_private" msgid="5380138334184923252">"စက်ကိရိယာသိုလှောင်မှုအဖြစ် ဖောမတ်ချပါ"</string>
<string name="storage_not_connected" msgid="4327902652748552794">"ချိတ်ဆက် မထား"</string>
<string name="storage_migrate" msgid="9137556600192167701">"ဤသိုလှောင်ခန်းသို့ ဒေတာများကိုရွှေ့ပါ"</string>
<string name="storage_migrate_away" msgid="7880100961434638430">"ဒေတာများကို အခြားသိုလှောင်ခန်းသို့ ရွှေ့ပါ"</string>
<string name="storage_no_apps" msgid="95566375753627272">"အရန်ကူးယူထားရန် အက်ပ်များမရှိပါ"</string>
<string name="storage_forget" msgid="4671975563260507003">"ဤစက်ပစ္စည်း သိုလှောင်ခန်းကို မေ့လိုက်ပါ"</string>
<string name="storage_forget_wall_of_text" msgid="230454348256179142">"ဤဒရိုက်တွင်ပါသော အပ်ဖ်များ သို့မဟုတ် ဒေတာကို အသုံးပြုရန်၊ ၎င်းကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ဒရိုက်အား မရရှိနိုင်လျှင် ဤသိုလှောင်မှုကို မေ့ပစ်ရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ \_n\_nအကယ်၍ မေ့ပစ်မည်ကို သင်ရွေးချယ်ခဲ့လျှင်၊ ဒရိုက်တွင်ပါဝင်သော ဒေတာများအားလုံး ထာဝရဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မည်။ \_n\_nအပ်ဖ်များကို သင်နောင်တွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း၊ ဤဒရိုက်တွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဒေတာများအား ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="storage_device_storage_section" msgid="22958375769694027">"စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှု"</string>
<string name="storage_removable_storage_section" msgid="280332107650735088">"ဖြုတ်၍ရသည့် သိုလှောင်မှု"</string>
<string name="storage_reset_section" msgid="3896575204828589494">"ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်"</string>
<string name="storage_mount_success" msgid="4459298609971461753">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ကိုတပ်ဆင်ထားသည်"</string>
<string name="storage_mount_failure" msgid="8521666906216755903">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ကိုတပ်ဆင်၍မရပါ"</string>
<string name="storage_mount_adopted" msgid="8880688040694403520">"USBသိုလှောင်ခြင်း ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည်"</string>
<string name="storage_unmount_success" msgid="8024867595129715661">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ကိုလုံခြုံစွာ ထုတ်လိုက်ပြီ"</string>
<string name="storage_unmount_failure" msgid="2228448194484319930">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ကိုလုံခြုံစွာ မထုတ်နိုင်ပါ"</string>
<string name="storage_unmount_failure_cant_find" msgid="2890335341404932068">"ထုတ်ရန် ဒရိုက်ကို ရှာမတွေ့ပါ"</string>
<string name="storage_format_success" msgid="5599914756144012286">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> အားဖောမတ်ချပြီးပြီဖြစ်သည်"</string>
<string name="storage_format_failure" msgid="5619442934314277332">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> အားဖောမတ်မလုပ်နိုင်ပါ"</string>
<string name="storage_wizard_format_as_private_title" msgid="7985715762649933211">"စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခန်းအဖြစ် ဖောမတ်ချပါ"</string>
<string name="storage_wizard_format_as_private_description" msgid="6143406934742456154">"လုံခြုံစေရန်အတွက် USB drive ကိုဖောမတ်ချရန်လိုအပ်ပါသည်။လုံခြုံစွာဖောမတ်ချပြီးတဲ့အခါဤ drive ကိုဤစက်ပစ္စည်းနှင့်တွဲသုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဖောမတ်ချခြင်းသည် drive မှာလက်ရှိ‌သိုလှောင်ထားသောအချက်အလက်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေပါသည်။အချက်အလက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အရံကူးယူထားပါ။"</string>
<string name="storage_wizard_format_as_public_title" msgid="7838838563997876718">"ဖျက်မည် &amp; ပုံစံချမည်"</string>
<string name="storage_wizard_format_as_public_description" msgid="5849129772499352597">"ဖောမတ်ချပြီးနောက်၊ ဤ USB ဒရိုက်ကို အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒေတာများအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပါမည်။ အက်ပ်များကို အခြားသိုလှောင်ခန်းသို့ ရွှေ့ခြင်းဖြင့် အရံကူးထားရန် ဦးစွာစီစဉ်ပါ။"</string>
<string name="storage_wizard_format_progress_title" msgid="3875906251546380271">"USB Drive အား ပုံစံပြင်နေစဉ်…"</string>
<string name="storage_wizard_format_progress_description" msgid="292229747129805538">"ခဏ ကြာနိုင်ပါသည်။ Drive အား ဖယ်ရှားမပစ်ပါနှင့်။"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_choose_title" msgid="8743036821605231654">"ဒေတာများရွှေ့ရန် သိုလှောင်ခန်းကိုရွေးပါ"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_title" msgid="5086390005970210697">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> သို့ ဒေတာများ ရွှေ့ပါ"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_description" msgid="918834441157741482">"သင့် ဓာတ်ပုံများ၊ ဖိုင်များနှင့် အက်ပ်ဒေတာများအား <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> သို့ ရွှေ့ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ် ကြာနိုင်သည်။ ရွှေ့နေစဉ် အချို့ အက်ပ်များ အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_action_move_now" msgid="7512917600174814567">"ယခုရွှေ့မည်"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_action_move_later" msgid="6379986754827551474">"နောက်မှ ရွှေ့မည်"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_toast_success" msgid="6153579567666607584">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်၏"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_toast_failure" msgid="8580347235983040966">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> သို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြင်း မရှိပါ"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_progress_title" msgid="2623480667090826800">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> သို့ ဒေတာများ ရွှေ့နေစဉ်…"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_progress_description" msgid="4023358325977284145">"ခဏ ကြာနိုင်သည်။ Drive အား မဖယ်ရှားပါနှင့်။ \_n ရွှေ့နေစဉ် အချို့ အက်ပ်များ အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။"</string>
<string name="storage_wizard_format_slow_title" msgid="7640229918512394316">"ဤ drive နှေးကွေးပုံပေါ်၏။"</string>
<string name="storage_wizard_format_slow_summary" msgid="3674023258060474037">"သင် ဆက်လက်သွားနိုင်သော်လည်း၊ ဤနေရာသို့ ရွှေ့ထားပြီးဖြစ်သော အက်ပ်များသည် အထစ်အငေါ့ဖြစ်နိုင်ပြီး ဒေတာ အပြောင်းအလဲပြုရာတွင် ကြာမြင့်နိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ပိုမြန်သော drive အား သုံးရန်စဉ်းစားပါ။"</string>
<string name="storage_wizard_format_action" msgid="3275676687226857170">"ဖောမတ်ချရန်"</string>
<string name="storage_wizard_backup_apps_action" msgid="1402199004931596519">"အပ်ဖ်များ အရံကူးထားမည်"</string>
<string name="storage_wizard_back_up_apps_title" msgid="6225663573896846937">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> မှာသိမ်းထားသောအပ်ဖ်များ"</string>
<string name="storage_wizard_back_up_apps_and_data_title" msgid="7763611380573099978">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> မှာသိမ်းထားသောအပ်ဖ်များနှင့်အချက်အလက်"</string>
<string name="storage_wizard_back_up_apps_space_available" msgid="5741521038349239359">"<xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g> ရနိုင်သည်"</string>
<string name="storage_wizard_eject_private_title" msgid="1336088625197134497">"စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခန်းကို ဆွဲထုတ်ပါ"</string>
<string name="storage_wizard_eject_private_description" msgid="4341905730016007385">"ဤစက်ပစ္စည်းကို ဆွဲထုတ်လိုက်လျှင် ၎င်းသိုလှောင်ခန်းအတွင်းရှိ အက်ပ်များ အလုပ်လုပ်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ ဤ USB ဒရိုက်ကို ဤစက်ပစ္စည်းတွင် အသုံးပြုရန်သာ ဖောမတ်ချထားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားနေရာတွင် အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။"</string>
<string name="storage_wizard_eject_progress_title" msgid="6025569356827683446">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ကိုဖြုတ်နေသည်…"</string>
<string name="storage_wizard_move_app_title" msgid="6504922588346440942">"အသုံးပြုပြီး သိုလှောင်ရုံ"</string>
<string name="storage_wizard_move_app_progress_title" msgid="7058465372227392453">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>ရွှေ့နေသည်…"</string>
<string name="storage_wizard_move_app_progress_description" msgid="7673347796805764888">"ရွှေ့လျားနေစဉ် ဒရိုက်ကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။ \_nရွှေ့လျားခြင်း မပြီးသ၍ ဤစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> အပ်ဖ်သည် ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။"</string>
<string name="storage_wizard_forget_confirm_title" msgid="3709482471888830896">"စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခန်းကို မေ့ပစ်မလား။"</string>
<string name="storage_wizard_forget_confirm_description" msgid="5896860042525566767">"\_'မေ့ပစ်မည်\_'နှင့်အတူ ဤဒရိုက်တွင် သင်သိမ်းဆည်းထားသည့် သင့်ဒေတာများအားလုံး ထာဝရပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်။ သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုပါသလား?"</string>
<string name="storage_wizard_forget_action" msgid="5609631662522950596">"မေ့ပစ်ရန်"</string>
<string name="storage_new_title" msgid="4768955281180255038">"USB ဒရိုက် ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ"</string>
<string name="storage_new_action_browse" msgid="3355241742574072658">"ရှာကြည့်ရန်..."</string>
<string name="storage_new_action_adopt" msgid="6809707961170895964">"စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခန်းအဖြစ် စနစ်ထည့်သွင်းပါ"</string>
<string name="storage_new_action_format_public" msgid="1964662216574764811">"ဖြုတ်၍ရသော သိုလှောင်မှဒ"</string>
<string name="storage_new_action_eject" msgid="919249291814300000">"ထုတ်မည်"</string>
<string name="storage_missing_title" msgid="9068915586235805818">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ"</string>
<string name="storage_missing_description" msgid="6835620703133204249">"ဒရိုက်အား ပြန်လည်မချိတ်ဆက်မှီအထိ အချို့အပ်ဖ်များသည် ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။"</string>
<string name="insufficient_storage" msgid="4175940286022466535">"သိမ်းဆည်းရန်နေရာအလုံအလောက်မရှိပါ"</string>
<string name="does_not_exist" msgid="4071082040759146781">"အပလီကေးရှင်းမှာ မရှိပါ"</string>
<string name="invalid_location" msgid="5571789982293787489">"ထည့်သွင်းသည့်နေရာ မမှန်ကန်ပါ"</string>
<string name="system_package" msgid="8276098460517049146">"ပြင်ပမီဒီယာတွင် စနစ်တိုးမြင့်ခြင်းအား မပြုလုပ်နိုင်ပါ"</string>
<string name="move_error_device_admin" msgid="4144472536756635173">"ပြင်ပသိုလှောင်ရာတွင် စက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်ကို ထည့်သွင်း၍မရပါ။"</string>
<string name="learn_more_action" msgid="7972102006620925604">"ပိုမိုလေ့လာရန်"</string>
<string name="system_date" msgid="2503462662633178207">"ရက်စွဲ"</string>
<string name="system_time" msgid="8434726081412227535">"အချိန်"</string>
<string name="system_set_date" msgid="5815123588301469720">"ရက်စွဲ သတ်မှတ်ရန်"</string>
<string name="system_set_time" msgid="7179243042276057341">"အချိန် သတ်မှတ်ရန်"</string>
<string name="system_set_time_zone" msgid="6471564469883225195">"အချိန် ဇုန်ကို သတ်မှတ်ရန်"</string>
<string name="system_set_time_format" msgid="902518158066450918">"၂၄ နာရီပုံစံကို သုံးမည်"</string>
<string name="system_auto_date_time" msgid="8458199433555868708">"အလိုအလျောက် ရက်စွဲ &amp; အချိန်"</string>
<item msgid="8119837829162871025">"ကွန်ယက်မှပေးသော အချိန်ကို အသုံးပြုရန်"</item>
<item msgid="1010003447137304123">"ကွန်ယက်မှပေးသော အချိန်ကို အသုံးပြုရန်"</item>
<item msgid="5645263357181875427">"သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ ထောက်ပံ့သည့် အချိန်ကိုအသုံးပြုရန်"</item>
<string name="system_location" msgid="4057295363709016511">"တည်နေရာ"</string>
<string name="system_desc_location" msgid="1680134126100535031">"သင်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းခံခဲ့ကြသည့် အက်ပ်များက သင်၏ တည်နေရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုကြပါစေ။"</string>
<string name="system_network_location_confirm" msgid="7128162421781085332">"တည်နေရာ သဘောတူခွင့်ပြုချက်"</string>
<string name="location_mode_title" msgid="728244518174115443">"မုဒ်"</string>
<string name="location_category_recent_location_requests" msgid="4541924383164183490">"မကြာမီက တည်နေရာ တောင်းခံမှုများ"</string>
<string name="location_no_recent_apps" msgid="7033474075806435793">"မည်သည့် အက်ပ်ကမှ မကြာမီတုန်းက တည်နေရာကို မတောင်းခံခဲ့ပါ။"</string>
<string name="location_high_battery_use" msgid="5325556609027887602">"ဘက်ထရီ သုံးစွဲမှု များသော"</string>
<string name="location_low_battery_use" msgid="728585923412018253">"ဘက်ထရီ သုံးမှု နည်း"</string>
<string name="location_mode_wifi_description" msgid="84697248707903061">"တည်နေရာကို ခန့်မှန်းရန် Wi-Fi ကို သုံးပါ"</string>
<string name="location_status" msgid="3037321737386011224">"တည်နေရာ အခြေအနေ"</string>
<string name="location_services" msgid="551503779736382878">"တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုများ"</string>
<string name="on" msgid="4899322147062342542">"ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="off" msgid="3127416478888499352">"မရှိ"</string>
<string name="google_location_services_title" msgid="6304196603522909239">"Google တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုများ"</string>
<string name="third_party_location_services_title" msgid="2826218400381676508">"အခြားသူတို့၏ တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုများ"</string>
<string name="location_reporting" msgid="3552501333650895634">"တည်နေရာကို အစီရင်ခံခြင်း"</string>
<string name="location_history" msgid="4055660203090513120">"တည်နေရာ မှတ်တမ်း"</string>
<string name="location_reporting_desc" msgid="1580018652781674608">"Google သည် ဒီအင်္ဂါရပ်ကို Google Now နှင့် Google မြေပုံများလို ထုတ်ကုန်များ ထဲမှာ အသုံးပြုပါသည်။ တည်နေရာ အစီရင်ခံမှုကို ဖွင့်ထားခြင်းက သင့် ကိရိယာ၏ နောက်ဆုံး တည်နေရာ ဒေတာကို Google အကောင့်နှင့် ဆက်နွှယ်လျက် အသုံးပြုခြင်း နှင့် သိုလှောင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။"</string>
<string name="location_history_desc" msgid="926674012916014270">"တည်နေရာ မှတ်တမ်းကို ဒီအကောင့် အတွက် ဖွင့်ထားလျှင်၊ Google သည် သင်၏ အက်ပ်များ သုံးနိုင်ဖို့ သင့်ကိရိယာ၏ တည်နေရာကို သိုလှောင်ပေးသည်။\_n\_nဥပမာ၊ Google မြေပုံများက သင့်အား လမ်းညွှန်းမှုများကို ပေးနိုင်သလို၊ Google Now က ယာဉ်ကူးပြောင်းမှု အကြောင်းကို အသိပေးနိုင်သည်။ \_n\_nသင်သည် တည်နေရာ မှတ်တမ်းကို အချိန်မရွေး ပိတ်ပစ်နိုင်သည်၊ သို့သော် ထိုသို့ လုပ်မှုက ၎င်းကို ဖျက်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်၏ တည်နေရာ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရန် နှင့် စီမံကွပ်ကဲရန်၊ maps.google.com/locationhistory ကို ဝင်ကြည့်ပါ။"</string>
<string name="delete_location_history_title" msgid="707559064715633152">"တည်နေရာ မှတ်တမ်း ဖျက်ရန်"</string>
<string name="delete_location_history_desc" msgid="4035229731487113147">"၎င်းက ဒီ Google အကောင့် အတွက် ဒီကိရိယာ ထံမှ သိုလှောင်ခဲ့သည့် တည်နေရာ မှတ်တမ်း အားလုံးကို ဖျက်ပစ်မည်။ သင်သည် ဒီဖျက်မှုကို ပြန်မပြင်နိုင်ပါ။ အချို့ အက်ပ်များ၊ Google ယခု အပါအဝင်၊ အလုပ်လုပ်မှု ရပ်တန့်ကြမည်။"</string>
<string name="system_services" msgid="5754310941186053151">"ဝန်ဆောင်မှုများ"</string>
<string name="accessibility_service_settings" msgid="3251334786870932423">"ဝန်ဆောင်မှု ဆက်တင်များ"</string>
<string name="accessibility_toggle_high_text_contrast_preference_title" msgid="9200419191468995574">"ဖြူမဲခြားနားချက် မြင့် စာသား"</string>
<string name="accessibility_shortcut" msgid="5856158637840030531">"အများသုံးစွဲနိုင်မှု ဖြတ်လမ်းလင့်ခ်"</string>
<string name="accessibility_shortcut_enable" msgid="6603542432267329986">"အများသုံးစွဲနိုင်မှု ဖြတ်လမ်းလင့်ခ်ကို ဖွင့်မည်"</string>
<string name="accessibility_shortcut_service" msgid="2053250146891420311">"ဖြတ်လမ်းလင့်ခ် ဝန်ဆောင်မှု"</string>
<string name="accessibility_shortcut_description" msgid="2050424178481510046">"ဖြတ်လမ်းလင့်ခ် ဖွင့်ထားလျှင် အနောက်နှင့် အောက်သို့ ခလုတ်နှစ်ခုစလုံးကို ၃ စက္ကန့်ကြာသည့်တိုင် ဖိထားခြင်းဖြင့် အများသုံးစွဲနိုင်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="accessibility_captions" msgid="3411554568812306549">"စာတန်းများ"</string>
<string name="accessibility_captions_description" msgid="3827820027578548160">"ဗီဒီယိုမှာ အပိတ် စာတန်း စာသား အတွက် ဆက်တင်များ"</string>
<string name="captions_display" msgid="2598662495450633375">"မြင်ကွင်း"</string>
<string name="captions_display_on" msgid="480438033345455728">"ဖွင့်ထား"</string>
<string name="captions_display_off" msgid="87881163874948539">"ပိတ်ထား"</string>
<string name="display_options" msgid="2645282080948371603">"မြင်ကွင်း ရွေးစရာများ"</string>
<string name="captions_configure" msgid="711991018642931958">"စီစဉ်ပေးရန်"</string>
<string name="captions_language" msgid="5905918439449912646">"ဘာသာစကား"</string>
<string name="captions_language_default" msgid="3894192926725192528">"မူရင်း"</string>
<string name="captions_textsize" msgid="7161136610669343510">"စာလုံး အရွယ်အစား"</string>
<string name="captions_captionstyle" msgid="6650139717545516071">"စာတန်း စတိုင်"</string>
<string name="captions_customoptions" msgid="7691004663572161126">"စိတ်ကြိုက် ရွေးစရာများ"</string>
<string name="captions_fontfamily" msgid="1026632786438880997">"ဖောင့်မိသားစု"</string>
<string name="captions_textcolor" msgid="1566679779609140317">"စာလုံး အရောင်"</string>
<string name="captions_edgetype" msgid="4875636291904824401">"အနားသတ် ပုံစံ"</string>
<string name="captions_edgecolor" msgid="2779925179084237336">"အနားသတ် အရောင်"</string>
<string name="captions_backgroundshow" msgid="1080183686470477645">"နောက်ခံတွင် ပြပါ"</string>
<string name="captions_backgroundcolor" msgid="2056944109914399253">"နောက်ခံ အရောင်"</string>
<string name="captions_backgroundopacity" msgid="1850126438162000027">"နောက်ခံ အလင်းပိတ်မှု"</string>
<string name="captioning_preview_text" msgid="3034147586392743237">"စာတန်းများကို ဤသို့ မြင်ရမည်"</string>
<string name="captions_textopacity" msgid="6055602491649526307">"စာသား အလင်းပိတ်မှု"</string>
<string name="captions_windowshow" msgid="6002072054703167886">"ဝင်းဒိုးပြပါ"</string>
<string name="captions_windowcolor" msgid="7460430328878876648">"ဝင်ဒိုး အရောင်"</string>
<string name="captions_windowopacity" msgid="8645082670322789314">"ဝင်ဒိုး အလင်းပိတ်မှု"</string>
<string name="captions_style_0" msgid="169414884289770256">"အမည်းပေါ်အဖြူ"</string>
<string name="captions_style_1" msgid="8236052739817535538">"အဖြူပေါ်အမည်း"</string>
<string name="captions_style_2" msgid="456353889540431910">"အမည်းပေါ်အဝါ"</string>
<string name="captions_style_3" msgid="3860050153620761166">"အပြာပေါ်အဝါ"</string>
<string name="captions_style_custom" msgid="9062905566459387931">"စိတ်တိုင်းကျ"</string>
<string name="color_white" msgid="4188877187457167678">"အဖြူ"</string>
<string name="color_black" msgid="2631818627391955149">"အမည်း"</string>
<string name="color_red" msgid="1899020130465926495">"အနီ"</string>
<string name="color_green" msgid="7546929005626106667">"အစိမ်း"</string>
<string name="color_blue" msgid="7681690245150985958">"အပြာ"</string>
<string name="color_cyan" msgid="3172130225116530998">"စိမ်းပြာ"</string>
<string name="color_yellow" msgid="3519470952904560404">"အဝါ"</string>
<string name="color_magenta" msgid="2377854703399624607">"ပန်းခရမ်း"</string>
<string name="system_accessibility_status" msgid="8504842254080682515">"ဖွင့်ပါ"</string>
<string name="system_accessibility_config" msgid="4820879735377962851">"စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု"</string>
<string name="system_accessibility_service_on_confirm_title" msgid="4547924421106540376">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>ကိုသုံးမလား?"</string>
<string name="system_accessibility_service_on_confirm_desc" msgid="1291445700158602622">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g> သည် သက် ရိုက်ထည့်သည့် စာသား အားလုံးကို၊ စကားဝှက်များမှ အပ၊ စုစည်းနိုင်သည်။ ၎င်းထဲမှာ အကြွေးကဒ် နံပါတ်များလို ကိုယ်ရေး ဒေတာများ ပါဝင်ကြသည်။"</string>
<string name="system_accessibility_service_off_confirm_title" msgid="1110904358228641834">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g> ကိုရပ်မလား။"</string>
<string name="system_accessibility_service_off_confirm_desc" msgid="3486513644923267157">"OK ကို ရွေးပါက <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>ကို ရပ်ပါမည်။"</string>
<string name="system_accessibility_tts_output" msgid="3186078508203212288">"စာသားမှ စကားပြောသို့"</string>
<string name="system_accessibility_tts_engine_config" msgid="4757760652785865532">"အင်ဂျင် စီဖွဲ့မှု"</string>
<string name="system_speak_passwords" msgid="8556036524146404052">"စကားဝှက်ကို ပြောပေးရန်"</string>
<string name="system_preferred_engine" msgid="3545505072652708443">"ပိုနှစ်သက်သော အင်ဂျင်"</string>
<string name="system_speech_rate" msgid="6553204071403872669">"စကားပြောနှုန်း"</string>
<string name="system_play_sample" msgid="3934369914309865584">"နမူနာကို ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="system_install_voice_data" msgid="8016395777968958673">"အသံ ဒေတာကို တပ်ဆင်ပေးခြင်း"</string>
<string name="system_general" msgid="687760148454147771">"အထွေထွေ"</string>
<string name="system_debugging" msgid="1576324426385458481">"ဒီဘာဂင်"</string>
<string name="system_input" msgid="4457152980514604873">"ရိုက်သွင်းမှု"</string>
<string name="system_drawing" msgid="5802739024643871942">"ပုံရေးဆွဲခြင်း"</string>
<string name="system_monitoring" msgid="7997260748312620855">"စောင့်ကြပ်ခြင်း"</string>
<string name="system_apps" msgid="8481888654606868074">"အက်ပ်များ"</string>
<string name="system_stay_awake" msgid="5935117574414511413">"ဖွင့်လျက် ရှိနေရန်"</string>
<string name="system_hdcp_checking" msgid="3757586362130048838">"HDCP စစ်ဆေးနေ"</string>
<string name="system_hdmi_optimization" msgid="4122753440620724144">"HDMI ဆီလျော်အောင် လုပ်ပေးခြင်း"</string>
<string name="system_reboot_confirm" msgid="7035370306447878560">"ယခု ပြန်စမလား။"</string>
<string name="system_desc_reboot_confirm" msgid="1567738857421128179">"ဒီဆက်တင်ကို မွမ်းမံရန်၊ သင်၏ ကိရိယာကို ပြန်ပြီးဖွင့်ပေးရန် လိုသည်။"</string>
<string name="system_never_check" msgid="2860070727606369055">"မည်သည့်အခါမှ မစစ်ဆေးပါနှင့်"</string>
<string name="system_check_for_drm_content_only" msgid="6667617772587997533">"DRM အကြောင်းအရာကိုသာ စစ်ဆေးရန်"</string>
<string name="system_always_check" msgid="384870282800221580">"အမြဲတမ်း စစ်ဆေးရန်"</string>
<string name="system_bt_hci_log" msgid="1891838112637932603">"ဘလူးတုသ် HCI မှတ်သားထားခြင်း"</string>
<string name="system_email_address" msgid="3725494874473757217">"အီးမေးလ် လိပ်စာ"</string>
<string name="system_usb_debugging" msgid="2158285492172755923">"USB ဒီဘာဂင်"</string>
<string name="system_allow_mock_locations" msgid="2483106887711851466">"ပုံစံတု တည်နေရာများကို ခွင့်ပြုရန်"</string>
<string name="system_select_debug_app" msgid="6200987902307533721">"အမှားရှာပြင်ခြင်း လုပ်ပေးမည့် အက်ပ်ကို ရွေးရန်"</string>
<string name="system_wait_for_debugger" msgid="5715878008542589060">"ဒီဘာဂါးကို စောင့်ရန်"</string>
<string name="system_verify_apps_over_usb" msgid="7289212844195483932">"USB ဖြင့် အက်ပ်များကို အတည်ပြုစိစစ်ရန်"</string>
<string name="system_desc_verify_apps_over_usb" msgid="7737988681480237094">"ADB/ADT မှတစ်ဆင့် တပ်ဆင်ခဲ့သည့် အက်ပ်များကို အန္တရာယ် အပြုအမူများ အတွက် စစ်ကြည့်ရန်"</string>
<string name="system_wifi_verbose_logging" msgid="3097788974146704831">"ကြိုးမဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မှတ်သားခြင်း"</string>
<string name="system_desc_wifi_verbose_logging" msgid="3537578245428327314">"ကြိုးမဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မှတ်သားခြင်းကို ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="system_show_touches" msgid="8244331695139748286">"ထိတွေ့မှုများကို ပြရန်"</string>
<string name="system_pointer_location" msgid="8724050865245555084">"ညွှန်းမြား၏ တည်နေရာ"</string>
<string name="system_show_layout_bounds" msgid="8803080672553699649">"အဆင်အပြင် ဘောင်များကို ပြရန်"</string>
<string name="system_show_gpu_view_updates" msgid="1625918928089365222">"GPU မြင်ကွင်း မွမ်းမံမှုများကို ပြရန်"</string>
<string name="system_show_hardware_layer" msgid="5833664339844452290">"ဟာ့ဒ်ဝဲ အလွှာကို ပြရန်"</string>
<string name="system_show_gpu_overdraw" msgid="5073007513540516704">"GPU ကျော်လွန်မှုကို ပြရန်"</string>
<string name="system_show_surface_updates" msgid="7680759813613585278">"မျက်နှာပြင် မွမ်းမံမှုများကို ပြရန်"</string>
<string name="system_window_animation_scale" msgid="685477540250939659">"ဝင်ဒိုး လှုပ်ရှားပုံများ စကေး"</string>
<string name="system_transition_animation_scale" msgid="7266380208347453619">"အသွင်ပြောင်း လှုပ်ရှားပုံ စကေး"</string>
<string name="system_animator_duration_scale" msgid="3829445237130423625">"လှုပ်ရှားပုံများ ကြာမှု စကေး"</string>
<string name="system_strict_mode_enabled" msgid="7392183793064579588">"တင်းကြပ် မုဒ် ဖွင့်ထား"</string>
<string name="system_profile_gpu_rendering" msgid="1113416260742329348">"ပရိုဖိုင် GPU တင်ဆက်နေ"</string>
<string name="system_enable_traces" msgid="108745519968154528">"ခြေရာခံမှု ဖွင့်ထားရန်"</string>
<string name="system_dont_keep_activities" msgid="4641165963339846161">"လှုပ်ရှားမှုများကို သိမ်းမထားပါနှင့်"</string>
<string name="system_background_process_limit" msgid="1985373407150771045">"နောက်ခံ လုပ်ငန်းစဉ် ကန့်သတ်ချက်"</string>
<string name="system_show_all_anrs" msgid="5353216640638263217">"ANRများ အားလုံးကို ပြသရန်"</string>
<string name="system_desc_stay_awake" msgid="8485868071929937500">"အနားယူမှု ပိတ်ထားရန်"</string>
<string name="system_desc_hdcp_checking" msgid="1664068008848077241">"DRM အကြောင်းအရာ အတွက်သာ သုံးရန်"</string>
<string name="system_desc_hdmi_optimization" msgid="5695603795556335912">"ပြသမှုကို အများဆုံး ပြတ်သားမှု သို့မဟုတ် ပုံရွေ့ရှားနှုန်း အတွက် ဆီလျော်အောင် လုပ်ပေးပါ။ ဒါက Ultra HD ပြကွက်များကိုသာ အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဒီဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်းက သင့်ကိရိယာကို ပြန်ပြီးဖွင့်မည်။"</string>
<string name="system_desc_bt_hci_log" msgid="2592649923221658103">"ဘလူးတုသ် HCI ဆိုင်ရာ မှတ်သားခြင်းကို ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="system_desc_usb_debugging" msgid="5672275208185222785">"USB ချိတ်ဆက်ထား ချိန်မှာ အမှားရှာပြင်ခြင်း မုဒ်"</string>
<string name="system_desc_wait_for_debugger" msgid="7213496668606417691">"အမှားရှာပြင်ခြင်း လုပ်ထားသည့် အပလီကေးရှင်းသည် မလုပ်ကိုင်မီမှာ ဒီဘာဂါးကို ပူးတွဲပေးမှာကို စောင့်ရသည်။"</string>
<string name="system_desc_show_layout_bounds" msgid="5275008598296135852">"ကလီပ် အနားသတ်များ၊ မာဂျင်များ စသဖြင့် ပြပါ။"</string>
<string name="system_desc_show_gpu_view_updates" msgid="9088343415389734854">"GPU နှင့်အတူ ရေးဆွဲထားလျှင် ၀င်ဒိုးများ အတွင်းပိုင်း လျှပ်တပြက် မြင်ကွင်းများ"</string>
<string name="system_desc_show_hardware_layer" msgid="3483713991865249527">"ဟာ့ဒ်ဝဲ အလွှာများကို မွမ်းမံ ချိန်မှာ အစိမ်းရောင်ဖြင့် လင်းပြရန်"</string>
<string name="system_desc_show_gpu_overdraw" msgid="74019834911598588">"အကောင်းဆုံးမှ အဆိုးဆုံးဆီသို့: အပြာ၊ အစိမ်း၊ အနီဖျော့၊ အနီ"</string>
<string name="system_desc_show_surface_updates" msgid="4018685547515133353">"ဝင်ဒိုး မျက်နှာပြင်များ တစ်ခုလုံးကို မွမ်းမံ နေချိန်မှာ လင်းပြရန်"</string>
<string name="system_desc_strict_mode_enabled" msgid="1974896408481676324">"အက်ပ်များက ပင်မ အမျှင်တန်းမှာ ရေရှည် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေချိန်မှာ မျက်နှာပြင်ကို လင်းပြရန်"</string>
<string name="system_desc_profile_gpu_rendering" msgid="1594070211030991">"adb အခွံ dumpsys gfxinfo ထဲက တင်ဆက်မှု အချိန်ကို တိုင်းထွာသည်။"</string>
<string name="action_on_title" msgid="1074972820237738324">"ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="action_off_title" msgid="3598665702863436597">"မရှိ"</string>
<string name="action_on_description" msgid="9146557891514835767">"ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="action_off_description" msgid="1368039592272701910">"မရှိ"</string>
<string name="agree" msgid="8155497436593889753">"သဘောတူ"</string>
<string name="disagree" msgid="7402998517682194430">"သဘောမတူ"</string>
<string name="security_unknown_sources_title" msgid="2012801664240314305">"မသိရသော ရင်းမြစ်များ"</string>
<string name="security_unknown_sources_desc" msgid="7196715598352173267">"Play စတိုး မဟုတ်သည့် အခြား အရင်းအမြစ်များမှ အက်ပ်များ တပ်ဆင်မှုကို ခွင့်ပြုရန်"</string>
<string name="security_unknown_sources_confirm_title" msgid="4600896691987804985">"အမည်မသိအရင်းအမြစ်များကို ခွင့်ပြုပါ"</string>
<string name="security_unknown_sources_confirm_desc" msgid="7883820068140189584">"အမျိုးအမည်မသိ အက်ပ်များက သင်၏ ကိရိယာနှင့် ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို ပို၍တိုက်ခိုက်နိုင်ပါသည်။ ယင်း အက်ပ်များကို အသုံးပြုမှုကြောင့် သင့်ကိရိယာ ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာ ဆုံးရှုံးခြင်းတို့အတွက် သင်သည်သာ လုံးဝ တာဝန်ရှိကြောင်း သင်က သဘောတူသည်။"</string>
<string name="security_verify_apps_title" msgid="7701897649287177386">"အက်ပ်များကို စိစစ်ရန်"</string>
<string name="security_verify_apps_desc" msgid="4638106288791726527">"အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော အက်ပ်များကို ခွင့်မပြုရန် သို့မဟုတ် မတပ်ဆင်မီ သတိပေးရန်"</string>
<string name="system_hdcp_checking_never" msgid="3251512398865365135">"မည်သည့်အခါမှ"</string>
<string name="system_hdcp_checking_drm" msgid="2159124883496899278">"DRM အကြောင်းအရာ အတွက်"</string>
<string name="system_hdcp_checking_always" msgid="5868177105455148262">"အမြဲတမ်း"</string>
<string name="system_hdmi_optimization_best_resolution" msgid="4916028940107998097">"အကောင်းဆုံး ပြတ်သားမှု"</string>
<string name="system_hdmi_optimization_best_framerate" msgid="3778579148517609370">"အကောင်းဆုံး ဘောင်နှုန်း"</string>
<string name="system_hw_overdraw_off" msgid="6637679040053936280">"ပိတ်ထား"</string>
<string name="system_hw_overdraw_areas" msgid="6442009722913530348">"ကျော်လွန် ဧရိယာများကို ပြရန်"</string>
<string name="system_hw_overdraw_counter" msgid="9132113146364838852">"ကျော်လွန် ရေတွက်မှုကို ပြရန်"</string>
<string name="no_application" msgid="1904437693440706534">"တခုမှမရှိ"</string>
<string name="enable_opengl_traces_none" msgid="4718084947494592040">"မရှိ"</string>
<item msgid="5408992662476056082">"လှုပ်ရှားများကို ပိတ်ရန်"</item>
<item msgid="6818290063799857019">"လှုပ်ရှားပုံများ စကေး ၀.၅ဆ"</item>
<item msgid="8257959452691080724">"လှုပ်ရှားပုံများ စကေး ၁x"</item>
<item msgid="4781052272686018414">"လှုပ်ရှားပုံများ စကေး ၁.၅ဆ"</item>
<item msgid="2272016945160227610">"လှုပ်ရှားပုံများ ၂x"</item>
<item msgid="5015441793276576312">"လှုပ်ရှားပုံများ စကေး ၅x"</item>
<item msgid="1290233583371556415">"လှုပ်ရှားပုံများ စကေး ၁၀x"</item>
<string name="track_frame_time_off" msgid="8845064783618702239">"ပိတ်ထား"</string>
<string name="track_frame_time_bars" msgid="5841531515222229632">"မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဘားတန်းများလို"</string>
<string name="app_process_limit_standard" msgid="6069948528843313888">"ပုံမှန် ကန့်သတ်ချက်"</string>
<string name="app_process_limit_zero" msgid="4094665021909774994">"နောက်ခံ လုပ်ငန်းစဉ်များ မရှိ"</string>
<string name="app_process_limit_one" msgid="4509089015775863726">"အများဆုံး လုပ်ငန်းစဉ် 1 ခု"</string>
<string name="app_process_limit_two" msgid="368216781690488529">"အများဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်2ခု"</string>
<string name="app_process_limit_three" msgid="2191860654645796987">"အများဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်3ခု"</string>
<string name="app_process_limit_four" msgid="9186705437061005461">"အများဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်4ခု"</string>
<string name="tts_rate_very_slow" msgid="1927454053669655117">"အလွန်နှေး"</string>
<string name="tts_rate_slow" msgid="7668484707347561166">"နှေး"</string>
<string name="tts_rate_normal" msgid="3631458247079252628">"ပုံမှန်"</string>
<string name="tts_rate_fast" msgid="5723868816257531421">"အမြန်"</string>
<string name="tts_rate_very_fast" msgid="7756663146626103952">"သိပ်မြန်"</string>
<string name="title_settings" msgid="780933693363320088">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ဆက်တင်များ"</string>
<string name="title_current_keyboard" msgid="891238509164879851">"လက်ရှိ ကီးဘုတ်"</string>
<string name="title_configure" msgid="846802387014612210">"စီစဉ်ဖွဲ့စည်းရန်"</string>
<string name="desc_configure_keyboard" msgid="3474279140150468141">"ကီးဘုတ် ရွေးစရာများ"</string>
<string name="title_current_autofill_service" msgid="9029001041887283153">"လက်ရှိအော်တိုဖြည့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု"</string>
<string name="title_select_autofill_service" msgid="696559582725756848">"အော်တိုဖြည့် ဝန်ဆောင်မှု ရွေးပါ"</string>
<string name="autofill_none" msgid="1615056985649424207">"မရှိ"</string>
<string name="autofill_confirmation_message" msgid="3840267789160192558">"&lt;b&gt;မည်သည့်အရာများကို အော်တိုဖြည့်နိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ အရာများကို အသုံးပြုခွင့်ပေးရန်&lt;/b&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;xliff:g id=app_name example=Password service&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; အက်ပ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။"</string>
<string name="computing_size" msgid="8623916230485437579">"တွက်ချက်နေ…"</string>
<string name="title_select_wifi_network" msgid="935820896444071617">"သင်၏ ကြိုးမဲ့ ကွန်ရက်ကို ရွေးရန်"</string>
<string name="accessories_wifi_display_rename_device" msgid="8803397194143132061">"အမည်ပြောင်းရန်"</string>
<string name="accessories_wifi_display_enable" msgid="2385467074170316302">"ကြိုးမဲ့ မြင်ကွင်း"</string>
<string name="accessories_wifi_display_pin_required" msgid="5434960694140426664">"PIN လိုအပ်"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4510042089342879264">"လုပ်ဆောင်ချက် ပြီးဆုံးစေရန် အသုံးပြုရမည်မှာ"</string>
<string name="alwaysUseQuestion" msgid="2643084054296937138">"ဒီလုပ်ဆောင်ချက် အတွက် အမြဲတမ်း ဒီရွေးစရာကို သုံးမလား?"</string>
<string name="alwaysUseOption" msgid="8799609235198714441">"အမြဲတမ်း သုံးရန်"</string>
<string name="justOnceOption" msgid="6714005843102804865">"တစ်ကြိမ်တည်းသာ"</string>
<string name="noApplications" msgid="7511175717026318399">"ဘယ် အက်ပ်ကမှ ဒီ လုပ်ဆောင်ချက်ကို မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။"</string>
<string name="noAppsGoBack" msgid="2538480554615467065">"နောက်သို့"</string>
<string name="inputs_inputs" msgid="8639408473661259307">"ထည့်သွင်းမှုများ"</string>
<string name="inputs_cec_settings" msgid="5948357769198260080">"ကိရိယာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆက်တင်များ"</string>
<string name="inputs_cable" msgid="8274665772422377063">"ကြိုးတီဗီ"</string>
<string name="inputs_game" msgid="4762255172943107070">"ဂိမ်း ခလုတ်ခုံ"</string>
<string name="inputs_custom_name" msgid="2649826613531559538">"စိတ်တိုင်းကျ အမည်"</string>
<string name="inputs_custom_name_description_fmt" msgid="2879134265596928298">"<xliff:g id="INPUT">%1$s</xliff:g> ထည့်သွင်းမှုကို အမည်ပေးပါ"</string>
<string name="inputs_hide" msgid="9223355763198742416">"ဝှက်ထား၏"</string>
<string name="inputs_show" msgid="2937435050499142756">"ဤထည့်သွင်းမှုကိုပြပါ"</string>
<string name="input_header_names" msgid="5903234218909970550">"အမည်"</string>
<string name="inputs_hdmi_control" msgid="650355636965841054">"HDMI ထိန်းချုပ်မှု"</string>
<string name="inputs_hdmi_control_desc" msgid="306769914209526682">"တီဗီကို HDMI ကိရိယာများကို ထိန်းချုပ်ခွင့် ပြုရန်"</string>
<string name="inputs_device_auto_off" msgid="2659766884754402352">"ကိရိယာ ပါဝါ အော်တို ပိတ်ရန်"</string>
<string name="inputs_device_auto_off_desc" msgid="1164897242719608201">"တီဗီကို HDMI ကိရိယာများဖြင့် ပါဝါ ပိတ်ရန်"</string>
<string name="inputs_tv_auto_on" msgid="544848340484583318">"တီဗီ အော်တို ပါဝါ ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="inputs_tv_auto_on_desc" msgid="3640723210479925817">"တီဗီကို HDMI ကိရိယာဖြင့် ပါဝါ ဖွင့်ရန်"</string>
<item quantity="other">ချိတ်ဆက်ထားသည့် ထည့်သွင်းမှုများ</item>
<item quantity="one">ချိတ်ဆက်ထားသည့် ထည့်သွင်းမှု</item>
<item quantity="other">ချိတ်ဆက်မထားသည့် ထည့်သွင်းမှုများ</item>
<item quantity="one">ချိတ်ဆက်မထားသည့် ထည့်သွင်းမှု</item>
<string name="user_add_profile_item_summary" msgid="3211866291940617804">"သင့်အက​ောင့်ရှိ အက်ပ်များနှင့် တစ်ခြားအရာများအား ဝင်ခွင့်အကန့်အသတ်ရှိခြင်း"</string>
<string name="user_new_profile_name" msgid="6637593067318708353">"ကန့်သတ် ပရိုဖိုင်"</string>
<string name="user_restrictions_controlled_by" msgid="8124926446168030445">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>မှထိန်းချုပ်ထားသည်"</string>
<string name="app_not_supported_in_limited" msgid="4046604594925826955">"ဒီအက်ပ်ကို ကန့်သတ် ပရိုဖိုင်များတွင် မပံ့ပိုးပါ။"</string>
<string name="app_sees_restricted_accounts" msgid="174038126799649152">"ဒီအက်ပ်သည် သင့်အကောင့်များကို ရယူနိုင်သည်။"</string>
<string name="restriction_location_enable_title" msgid="2552780806199464266">"တည်နေရာ"</string>
<string name="restriction_location_enable_summary" msgid="3719330231217994482">"သင့်တည်နေရာ သတင်းအချက်အလက်ကို အက်ပ်များအား သုံးခွင့်ပြုရန်"</string>
<string name="restricted_profile_switch_to" msgid="6193201935877168764">"ကန့်သတ် ပရိုဖိုင်သို့ ဝင်ရန်"</string>
<string name="restricted_profile_switch_out" msgid="3589381233390753413">"ကန့်သတ် ပရိုဖိုင်မှ ထွက်ရန်"</string>
<string name="restricted_profile_delete_title" msgid="7153982195273379506">"ကန့်သတ်ပရိုဖိုင်အား ဖျက်ရန်"</string>
<string name="restricted_profile_create_title" msgid="700322590579894058">"အကန့်အသတ်ရှိသည့် ပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီးပါ"</string>
<string name="restricted_profile_configure_title" msgid="3327502517511010296">"ဆက်တင်များ"</string>
<string name="restricted_profile_configure_apps_title" msgid="2244201859522056827">"ခွင့်ပြုထားသော အက်ပ်များ"</string>
<item quantity="other">အက်ပ်%d ခု ခွင့်ပြုသည်</item>
<item quantity="one">အက်ပ်၁ ခု ခွင့်ပြုသည်</item>
<string name="restricted_profile_allowed" msgid="970921490464867884">"ခွင့်ပြုသည်"</string>
<string name="restricted_profile_not_allowed" msgid="8184983064118036268">"ခွင့်မပြုပါ"</string>
<string name="restricted_profile_customize_restrictions" msgid="4723577877385636704">"ကန့်သတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ရန်"</string>
<string name="restricted_profile_configure_apps_description_loading" msgid="3293508876131962699">"ခဏလေး…"</string>
<string name="restricted_profile_change_password_title" msgid="6961384850606763601">"pin ကို ပြောင်းရန်"</string>
<string name="app_sees_restricted_accounts_and_controlled_by" msgid="1261056180558324892">"ဤအက်ပ်သည် သင့်အကောင့်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> မှထိန်းချုပ်ပါသည်"</string>
<string name="pin_enter_unlock_channel" msgid="243855138978654080">"ဤချာနယ် ကြည့်ရန် PIN ရိုက်ထည့်ပါ"</string>
<string name="pin_enter_unlock_program" msgid="275489015420025531">"ဤအစီအစဉ် ကြည့်ရန် PIN ရိုက်ထည့်ပါ"</string>
<string name="pin_enter_pin" msgid="5020029261153234751">"PIN ရိုက်ထည့်ရန်"</string>
<string name="pin_enter_new_pin" msgid="1930944619313642621">"PIN အသစ်ကို သတ်မှတ်ပေးရန်"</string>
<string name="pin_enter_again" msgid="7615050143778858658">"PIN အသစ်ကို ပြန်ရိုက်ထည့်ရန်"</string>
<string name="pin_enter_old_pin" msgid="5665265735227617942">"PIN အဟောင်းကို ရိုက်ထည့်ရန်"</string>
<string name="pin_enter_wrong_seconds" msgid="3014013615537066237">"PIN အမှာ ၅ ကြိမ် သင်ရိုက်ထည့်ခဲ့သည်။ <xliff:g id="RELATIVE_TIME_SPAN">%1$d</xliff:g> စက္ကန့်အကြာတွင် ထပ်မံကြိုးစားပါ \_n"</string>
<string name="pin_toast_wrong" msgid="4297542365877164402">"PIN မှားနေ၏၊ ထပ် စမ်းပါ"</string>
<string name="pin_toast_not_match" msgid="2439298696342975155">"PIN မှာ မတိုက်ဆိုင်ပါ၊ ထပ်ပြီး စမ်းပါ။"</string>
<string name="wifi_setup_input_password" msgid="8510003548463241234">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>အတွက် သင်၏ စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းရန်"</string>
<string name="wifi_setup_connection_success" msgid="3301901673876973474">"အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ"</string>
<string name="wifi_setup_save_success" msgid="6862510218032734919">"အောင်မြင်စွာ သိမ်းဆည်းပြီးပါပြီ"</string>
<string name="device_apps_app_management_version" msgid="2119174719194899740">"ဗားရှင်း <xliff:g id="APP_VERSION">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_apps_app_management_open" msgid="4249743535677261897">"ဖွင့်ထား"</string>
<string name="device_apps_app_management_force_stop" msgid="4454221309989640309">"အတင်း ရပ်ခိုင်းရန်"</string>
<string name="device_apps_app_management_force_stop_desc" msgid="1980972142863114899">"သင်က အက်ပ်တစ်ခုကို အတင်း ရပ်ခိုင်းခဲ့လျှင် ၎င်း၏ ပြုမူပုံ မှားယွင်းနိုင်သည်။"</string>
<string name="device_apps_app_management_uninstall" msgid="4171103696233332967">"ဖြုတ်ရန်"</string>
<string name="device_apps_app_management_uninstall_updates" msgid="5647988075828648951">"အပ်ဒိတ်များကိုဖယ်ထုတ်မည်လား?"</string>
<string name="device_apps_app_management_uninstall_updates_desc" msgid="4508586498292236706">"ဤAndroidစနစ်အပလီကေးရှင်းထဲရှိအပ်ဒိတ်များအားလုံးအား ထုတ်မည်"</string>
<string name="device_apps_app_management_disable" msgid="819003297535493633">"ပိတ်ထားရန်"</string>
<string name="device_apps_app_management_disable_desc" msgid="9143166267511427607">"ဤ အက်ပ်အားသင်ပိတ်လိုသလား?"</string>
<string name="device_apps_app_management_enable" msgid="9173340340253029114">"ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="device_apps_app_management_enable_desc" msgid="8686291003061136476">"ဤ အက်ပ်အားသင်ဖွင့်လိုသလား?"</string>
<string name="device_apps_app_management_storage_used" msgid="6725789557993296433">"အသုံးပြုပြီး သိုလှောင်ရုံ"</string>
<string name="device_apps_app_management_storage_used_desc" msgid="8928632612101487179">"<xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g> ကို <xliff:g id="VOLUME">%2$s</xliff:g> တွင်သုံးခဲ့သည်"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_data" msgid="7305471678286735600">"ဒေတာကို ဖယ်ရှားရန်"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_data_desc" msgid="170972356946852847">"ဤအပ်ဖ်၏ ဒေတာများအားလုံး ထာဝရဖျက်ပစ်ပါမည်။ \_n၎င်းတွင် ဖိုင်များအားလုံး၊ ဆက်တင်များ၊ အကောင့်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊ စသည်တို့ပါဝင်သည်။"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_default" msgid="4566187319647111484">"ပုံသေများကို ဖယ်ရှားရန်"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_default_set" msgid="1649974109123107390">"အချို့သော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ဤ အက်ပ်ကိုဖွင့်ရန်သတ်မှတ်ပါ"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_default_none" msgid="5935252537185381597">"ပုံသေများ သတ်မှတ် မထား"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_cache" msgid="2678301483598915479">"ကက်ရှကို ဖယ်ရှားရန်"</string>
<string name="device_apps_app_management_notifications" msgid="1687529279264810317">"အကြောင်းကြားချက်များ"</string>
<string name="device_apps_app_management_permissions" msgid="4951820230491375037">"ခွင့်ပြုချက်များ"</string>
<string name="device_apps_app_management_not_available" msgid="4198634078194500518">"အက်ပ်ကိုဖွင့်၍မရပါ"</string>
<string name="settings_cancel" msgid="576094334743686152">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="settings_on" msgid="7734010120323404333">"ဖွင့်ထား"</string>
<string name="settings_off" msgid="4060451657850476369">"ပိတ်ထား"</string>
<string name="device_daydreams_none" msgid="3405655350757277348">"မျက်နှာပြင်ကို ပိတ်ပါ"</string>
<string name="device_daydreams_select" msgid="7203264446482623438">"ဖန်သားပြင်အသုံးပြုမှု ချွေတာမှုစနစ်"</string>
<string name="device_daydreams_test" msgid="7828275397550076567">"ယခု စတင်ပါ"</string>
<string name="device_daydreams_sleep" msgid="6847770718407377357">"ဘယ်အချိန် စမလဲ"</string>
<string name="device_daydreams_sleep_description" msgid="6237610484915504587">"အသုံးမပြုသည့် ဤအချိန်ကာလပြီးနောက် ဖန်သားပြင်အသုံးပြုမှု ချွေတာမှုစနစ်ကို စတင်ပါမည်။ ဖန်သားပြင်အသုံးပြုမှု ချွေတာမှုစနစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားခြင်း မရှိလျှင်၊ ဖန်သားပြင် ပိတ်သွားပါမည်။"</string>
<string name="device_daydreams_sleep_summary" msgid="3081688734381995693">"<xliff:g id="SLEEP_DESCRIPTION">%1$s</xliff:g> ကြာ လှုပ်ရှားမှုမရှိလျှင်"</string>
<string name="device_daydreams_screen_off" msgid="2513117894550171240">"စက်ကို နားနေမုဒ်တွင် ထားပါ"</string>
<string name="device_daydreams_screen_off_description" msgid="1520184410742621809">"မလှုပ်ရှားမှု ဒီကာလ နောက်မှာ မျက်နှာပြင် ပိတ်သွားမည်။"</string>
<string name="backup_configure_account_default_summary" msgid="2170733614341544296">"မည်သည့်အကောင့်မှ ဒေတာအရံသင့်သိမ်းဆည်းခြင်းကို လောလောဆယ်မှာ သိုလှောင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါ။"</string>
<string name="backup_erase_dialog_message" msgid="222169533402624861">"သင်၏ ကြိုးမဲ့ စကားဝှက်များ၊ စာညှပ်များ၊ အခြား ဆက်တင်များ၊ နှင့် အက်ပ်ဒေတာအရံသင့်သိမ်းဆည်းမှု ရပ်စဲလိုက်ကာ Google ဆာဗာများ၏ ကော်ပီ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုပါသလား။"</string>
<string name="privacy_backup_data" msgid="3604057980102997914">"ကျွန်ုပ်ဒေတာများကို အရန်ထားခြင်း"</string>
<string name="privacy_backup_account" msgid="4527813051841860610">"အရန်ထားသည့် အကောင့်"</string>
<string name="privacy_automatic_restore" msgid="7117805818589418118">"အလိုအလျောက် ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်"</string>
<string name="factory_reset_device" msgid="6509900821515094361">"ကိရိယာကို ပြန်ညှိပါ"</string>
<string name="factory_reset_description" msgid="4448783644897046471">"ဤလုပ်ရပ်က အောက်ပါတို့ အပါအဝင် သင့်ကိရိယာတွင်းရှိ ဒေတာအားလုံးကို ဖျက်ပါမည်- သင်၏ Google အကောင့်၊ စနစ်၊ အက်ပ်ဒေတာနှင့် ဆက်တင်များ၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အက်ပ်များ"</string>
<string name="confirm_factory_reset_description" msgid="8521672637100742529">"သင့်ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်နှင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည့် အက်ပ်များ အားလုံးကို ဖျက်မလား။ ဤ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်ပြင်၍ မရနိုင်ပါ။"</string>
<string name="confirm_factory_reset_device" msgid="4308646529880718465">"အရာတိုင်းကို ဖျက်ရန်"</string>
<string name="select_device_name_title" msgid="3045019448327493634">"သင့်<xliff:g id="DEVICEMODEL">%1$s</xliff:g>အတွက် အမည်ရွေးပါ"</string>
<string name="select_device_name_description" msgid="8528185095614986580">"သင့်စက်ကို အခြားစက်များမှ ကာစ်လုပ်သောအခါဖြစ်စေ ချိတ်ဆက်သောအခါဖြစ်စေ ၎င်းကိုသိရှိစေရန် သင့်စက်ကို အမည်ပေးပါ။"</string>
<item msgid="1140506340411482365">"ဧည့်ခန်း TV"</item>
<item msgid="6448060889026244632">"မိသားစုအခန်း TV"</item>
<item msgid="3336274213215419228">"အိပ်ခန်း TV"</item>
<string name="custom_room" msgid="6798144004583173563">"စိတ်ကြိုက် အမည်ကိုဖြည့်ရန်…"</string>
<string name="device_rename_title" msgid="9070021379000499270">"<xliff:g id="DEVICEMODEL">%1$s</xliff:g> ကိုအမည်ပြောင်းပါ"</string>
<string name="device_rename_description" msgid="1973894029492915135">"<xliff:g id="DEVICEMODEL">%1$s</xliff:g> ကိုလက်ရှိတွင် \_"<xliff:g id="DEVICENAME">%2$s</xliff:g>\_" ဟုအမည်ပေးထားသည်"</string>
<string name="device_name_suggestion_title" msgid="3986220212759193742">"သင့်စက်အမည် သတ်မှတ်ခြင်း"</string>
<string name="device_name_suggestion_summary" msgid="4582691399302362938">"ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် အခြားအရာများကို သင့်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ကာစ်လုပ်သည့်အခါ ဤအမည်ကို အသုံးပြုပါ"</string>
<string name="change_setting" msgid="7211706374208138343">"ပြောင်းလဲရန်"</string>
<string name="keep_settings" msgid="703474489210093961">"မပြောင်းလဲပါနှင့်"</string>
<string name="apps_permissions" msgid="7876407267050498394">"ခွင့်ပြုချက်များ"</string>
<string name="device_apps_permissions" msgid="8421323706003063878">"အက်ပ်ခွင့်ပြုချက်များ"</string>
<string name="app_permissions_group_summary" msgid="6818210080117761117">"<xliff:g id="COUNT_0">%1$d</xliff:g> /<xliff:g id="COUNT_1">%2$d</xliff:g> အက်ပ်များ ခွင့်ပြုထား၏"</string>
<string name="bluetooth_permission_request" msgid="7788089036741496993">"ဘလူးတုသ် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံမှု"</string>
<string name="security_patch" msgid="5468261708915367254">"Android လုံခြုံမှု ပက်ခ်ျ အဆင့်"</string>
<string name="choose_application" msgid="2375936782103669988">"အပလီကေးရှင်းကို ရွေးပါ"</string>
<string name="experimental_preference" msgid="3982593252210557436">"(စမ်းသပ်ရေး)"</string>
<string name="reboot_safemode_action" msgid="2862127510492131128">"ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်မုဒ်သို့ ပြန်စပါ"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="5745977150299953603">"ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်မုဒ်သို့ ပြန်စလိုပါသလား။"</string>
<string name="reboot_safemode_desc" msgid="2919933461408942799">"၎င်းသည် ပြင်ပကုမ္ပဏီမှ သင်ထည့်သွင်းထားသည့် အက်ပ်များကို ပိတ်လိုက်ပါမည်။ သင်စက်ကို ပြန်စသည့်အချိန်တွင် ၎င်းတို့ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="capturing_bugreport" msgid="832512801903486821">"ချွတ်ယွင်းချက်အစီရင်ခံစာကို သိမ်းဆည်းနေပါသည်"</string>
<string name="available_virtual_keyboard_category" msgid="7445262027711560629">"ရရှိနိုင်သော ပကတိအသွင် ကီးဘုတ်များ"</string>
<string name="manage_keyboards" msgid="7983890675377321912">"ကီးဘုတ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်"</string>
<string name="app_permission_summary_allowed" msgid="5359622119044147500">"ခွင့်ပြုသည်"</string>
<string name="app_permission_summary_not_allowed" msgid="5131611341738385303">"ခွင့်မပြုပါ"</string>
<string name="usage_access" msgid="8402350645248312782">"သုံးစွဲမှုကို ကြည့်ရှုခြင်း"</string>
<string name="usage_access_description" msgid="3276026988575551587">"သင့်ဖုန်း၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ဘာသာစကား ဆက်တင်များနှင့် အခြားအသေးစိတ်များအပါအဝင် အခြားမည်သည့်အက်ပ်များကို သင်သုံးစွဲနေပြီး မည်မျှကြာကြာတစ်ခါ သုံးစွဲနေကြောင်း မှတ်သားရန်အတွက် သုံးစွဲမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းက အက်ပ်တစ်ခုအား ခွင့်ပြုသည်။"</string>
<string name="high_power_apps" msgid="5841073958519976562">"စွမ်းအင်အသုံးနည်းအောင်ပြုခြင်း"</string>
<string name="high_power_apps_description" msgid="8651692364795060525">"အက်ပ်များအတွက် စွမ်းအင်အသုံးနည်းအောင် ပြုခြင်း"</string>
<string name="high_power_apps_empty" msgid="3084512758421482051">"အသုံးနည်းအောင်ပြုစရာ အက်ပ်မရှိပါ"</string>
<string name="high_power_on" msgid="3120162683093360951">"မလုပ်ရသေးပါ"</string>
<string name="high_power_off" msgid="3588854600942236231">"စွမ်းအင်အသုံးနည်းအောင်ပြုခြင်း"</string>
<string name="high_power_system" msgid="6263052626979462255">"စွမ်းအင်အသုံးနည်းအောင် ပြု၍မရပါ"</string>
<string name="manage_notification_access_title" msgid="8659254371564990084">"အကြောင်းကြားချက် ရယူခြင်း"</string>
<string name="no_notification_listeners" msgid="5119406452675724448">"ထည့်သွင်းထားသည့်အက်ပ်များသည် အကြောင်းကြားချက်ရယူရန် တောင်းဆိုထားခြင်းမရှိပါ။"</string>
<string name="notification_listener_security_warning_summary" msgid="8602907284276088658">"၎င်းအက်ပ်များသည် အဆက်အသွယ် အမည်များနှင့် သင်လက်ခံရရှိသည့် စာများကဲ့သို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအပါအဝင် အသိပေးချက်များအားလုံး ကိုဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အသိပေးချက်များကို ပယ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၎င်းတို့တွင်ပါဝင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် ခလုတ်များကို နှိပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။"</string>
<string name="directory_access" msgid="7338555825237012006">"ဖိုင်လမ်းညွှန် သုံးခွင့်"</string>
<string name="directory_access_description" msgid="3630855858552422012">"ဤအက်ပ်များတွင် အချို့သောဖိုင်လမ်းညွှန်များကို သုံးခွင့်ရှိသည်။"</string>
<string name="system_alert_window_settings" msgid="5790572489650085051">"အခြားအက်ပ်များ၏ အပေါ်၌ ပြသခြင်း"</string>
<string name="permit_draw_overlay" msgid="5312730681030266735">"အခြားအက်ပ်များပေါ် ပြခွင့်ပြုရန်"</string>
<string name="allow_overlay_description" msgid="5152329837278240259">"သင်သုံးနေသော အခြားအက်ပ်များ၏ အပေါ်၌ နောက်အက်ပ်တစ်ခုအား ပြသခွင့်ပြုပါ။ ၎င်းသည် ထိုအက်ပ်များအသုံးပြုရာ၌ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အသွင်အပြင် သို့မဟုတ် အပြုအမူတို့ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။"</string>
<string name="write_system_settings" msgid="4284654265954461890">"စက်စနစ် ဆက်တင်များ ပြုပြင်ခြင်း"</string>
<string name="write_settings_title" msgid="2361816483383105754">"စနစ်ဆက်တင်များ ပြင်နိုင်ခြင်း"</string>
<string name="write_settings_description" msgid="7382397926674265937">"ဤခွင့်ပြုချက်သည် အက်ပ်ကို စက်စနစ် ဆက်တင်များအား ပြုပြင်ခွင့်ပေးသည်။"</string>
<string name="picture_in_picture_title" msgid="2636935591386702348">"တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်၍ ဖွင့်ခြင်း"</string>
<string name="picture_in_picture_app_detail_switch" msgid="3688997906817583854">"တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်၍ ဖွင့်ခွင့်ပြုရန်"</string>
<string name="picture_in_picture_empty_text" msgid="4370198922852736600">"ထည့်သွင်းထားသည့် အက်ပ်တစ်ခုမျှ တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်၍ ဖွင့်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ"</string>
<string name="picture_in_picture_app_detail_summary" msgid="3296649114939705896">"အက်ပ်ဖွင့်ထားစဉ် သို့မဟုတ် ထွက်လိုက်စဉ်တွင် အက်ပ်များအား တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်၍ ဖွင့်သည့် ဝင်းဒိုးတစ်ခု ပြုလုပ်ခွင့်ပြုပါ (ဥပမာ ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ရန်)။ ဤဝင်းဒိုးကို သင်သုံးနေသော အခြားအက်ပ်များ၏အပေါ်တွင် ပြသပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="special_access" msgid="21806055758289916">"အက်ပ် အထူးအသုံးပြုခွင့်"</string>
<string name="string_concat" msgid="5213870180216051497">"<xliff:g id="PART1">%1$s</xliff:g>၊ <xliff:g id="PART2">%2$s</xliff:g>"</string>